WOWOW ibhedi ekhitshini umxube oxubayo- isitayile esiqhuqhiweyo
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi / WOWOW Bridge Ikhitshi lokuntywila lokuntywila kwiTephu -INickel eBrashi
WOWOW Bridge Ikhitshi lokuntywila lokuntywila kwiTephu -INickel eBrashi
Isincedisi sempahla esivelisiweyo yimveliso yehardware ekufuneka siyisebenzise mihla le ebomini bethu, elungele ukuba sisebenzise amanzi. Phakathi kwazo, itawuli yokuhlambela yeyona mveliso ixhaphakileyo. isitayile sendlu yokuhanjiswa kwebhedi ekhitshini sinemilo eyahlukileyo, Khetha le mpompo ukufezekisa iimfuno zakho zokwenza ubuhle.
Ibridge ekhitshini lekhitshini
Eyona nto ngokuqinisekileyo, isitofu sokuya ekhitshini yimveliso yesixhobo ekhitshini osisebenzisa mihla le. Amaxesha amaninzi nkqu. Isikhephe esinki ekhitshini silungele ukucofa amanzi, ukusela amanzi, okanye ukucoca ikhitshi lakho. Kungenxa yoko unokufuna ukukhetha isitshixo sokukhangela ngobuchule ukuze ulungele iminqweno yakho ngokuchanekileyo. Ayisiqwalaseli kuphela isitayile sakho ekhitshini, kodwa ngokuqinisekileyo ngokuqinisekileyo ngokubhekisele ekusebenzeni nasekusebenzeni kwaso. Ikhitshi lekhitshi lekhitshi le-WOWOW likunika ikhusi lokwenza ikhephu elihlangane neminqweno yakho yobuhle. Amalungu ayo ajoyinayo ajikeleze isitayile sasehlobo saseFransi ekhitshini lakho. Oko kwenza ukuba uyilo lwakho lasekhitshini lwahluke. Isiporho eside nesinyibilikisiweyo sibonisa ikhitshi lakho ngochukumiso oluhle oludingayo ukuyinika into ye-wow.
Ukugqitywa kwe-nickel okugqityiweyo kunika imbonakalo egqibeleleyo kunye neembonakalo zomdiliya ekhitshini lekhitshi lakho. Ngokudibana kunye noyilo ngokwayo, ngokuqinisekileyo yenye yeefenetki zekhitshi lohlobo. Abaqulunqi beWOWOW bayazi indlela yokuyila ngesibindi ikhitshi lasekhitshini. Ungakuqaphela oko kuyo yonke into. Izitshitshisi zasekhitshini zeWOWOW zahlukile nakwezinye iikhitshi zekhitshi lasekhitshini. Abaqulunqi bangenantlonelo, bayazi yonke into malunga nezinto eziyilwe ekhitshini, kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba abaze bayijongele phantsi ifesitile yendawo yokugcina ikhitshi kuyo nayiphi na ikhitshi ekhitshini. Baqinisekile ukuba banokwenza umahluko kulo naluphi na uyilo lwekhitshi, kwaye benza konke okusemandleni abo ukufezekisa loo nto-ekhitshini lakho ngokunjalo.
I-Ergonomic bhedi ekhitshini isinki yokucofa
Intuthuzelo yinto yonke. Njengoko usebenzisa ikhitshi lakho lokutshiza ikhitshi izihlandlo ezininzi ngosuku, udinga uyilo lwe-ergonomic ekulula ukubamba nokulawula. Izibambo zihamba kakuhle ukuze kulawulwe ukuhamba kwamanzi ngokulula nangokuchanekileyo, zombini amanzi ashushu nabandayo. Ngale ndlela unokuxuba ubushushu bakho bamanzi obufanelekileyo. Ngaphandle koko, indawo emide etyibilikileyo eyahlukileyo ibonelela ngendawo yokuchitha splatter kunye namava angenamanzi avuthayo enza ukuba ikhitshi lincitshise isitshebo somthi kunokuba lilungele ukusetyenziswa.
Ukuntywila kwamanzi kwigumbi lokuntywila lokutshiza ekhitshini nako kucocekile ngenxa yokuvelisa i-aerator ye-Neoperl ABS. Ayisiyiyo ifowuni kuphela enikezela uxinzelelo lokuchasana nokuhamba kwamanzi ukuze wonge amanzi. Sukujongela phantsi ukuba ungonga ngaphezulu kwe-50% yamanzi ngesi sixhobo sisebenzayo. Ngokuqinisekileyo uya kuyiphawula le nto kwityala lakho lamanzi. Kwelinye icala amava akho amanzi ahlala engaguquki. Awuyi kuqaphela ukuba usebenzisa amanzi amancinci, ngakumbi xa uxinzelelo lwamanzi luphezulu. Kwaye ekugqibeleni kuya kuba nomjelo onzima ukuze ukwazi ukucoca izinto ngokulula ngejet enamandla, nokuba yeyiphi na imodi yamanzi oyisebenzisayo. Ungayicima ngokulula i-aerator ye-ABS ngaphandle kwezixhobo ukuze uyisuse nokuba icocekile okanye ithathe indawo yayo. Qaphela ukuba ucoca i-aerator rhoqo njengoko iintsalela zamanzi anzima ziqokelele apha. Akukho nokuba kufuneka ususe i-aerator ngokwayo ukuze uyicoca rhoqo. Nje ngokuswayipha okukhawulezayo ngomnwe wakho, ungasusa yonke intsalela enzima ngokulula nangokulula.
Indawo enkulu yentsimbi yebridge ekhitshini
Isikhenkcisi se-bhedi ekhitshini sakhiwe ukusuka kubhedu oluxhathisa kakhulu nokugqwala kunye nokulwa nobushushu obuphezulu ngokugqwesileyo. Ngenxa yoko ibhedi yesitshi ekhitshini yenzelwe ukuhlala iminyaka emininzi. Ayisiyo kuphela izixhobo zokuxhuma ekhitshini ezenziwe ngobhedu olomeleleyo. Kananjalo uqhagamshelo lwe-½ intshi NPS lwenziwe ngobhedu olukumgangatho ophezulu oluqinileyo. Uyayibona xa ubambe le bhedi yesitshixo ekhitshini ezandleni zakho. Ngenxa yesisindo sayo unokuxela kwangoko ukuba izinto ezingagcinwanga zinikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali onokufumana.
Umphezulu we-nickel ogcweleyo awoneli nje ngeplani yokuntywila ekhitshini ekhitshini kunye nogqibelo oluhle, ikwakhusela nekhitshi lokuthena ekhitshini lakho. Ngenxa yokugqitywa komgangatho, ikunika i-anti-scratch kunye ne-non-corrosion yamava. Ifenitshala yakho yebhedi yekitshi ayinakungakhuselekanga nakubani na, kwaye ingagcinwa ikwimeko entle ixesha elide. Ukugqitywa komphezulu we-nickel ogqityiweyo kukwakunika isibonelelo sokuba iiprinta zeminwe azihlali ekhitshini lokucoca ikhitshi. Uya kuba ne-faucet emnandi ecocekileyo ekhonkco ekhitshini ngalo lonke ixesha.
Ikhitshi lakudala lekhitshi lokuntywila
Ikhitshi lekhitshi lekhitshi le-WOWOW likhangeleka njengephedi yasekhitshini. Ngaphandle kwento le bhedi yesitshixo sekhitshi ifakwa kwiindawo ezininzi zorhwebo njengeendawo zokuchithela ezinqabileyo. Isikhuselo sokuntywila sekhitshi ekhitshini senziwe ukuba sibonisa ubuhle bangaphambili benkulungwane yama-20. Indawo yokugcina ikhitshi ekhitshini inika isikhombisi esithandekayo sobukhazikhazi besiko lekhitshi lakho. Ukuphakama kwigumbi lokuqubha lekhitshi lokuphamba kuku malunga ne-intshi ezi-8. Le silhouette mide igqunyiweyo ngokuqinisekileyo ibe negalelo elikhulu kuyilo lwayo. Iwaranti yokutshiza ekhitshini lasewaranti Umgangatho we-WOWOW ungajongwanga. Ngenxa yokusetyenziswa kwezixhobo zobhedu ezikumgangatho ophezulu kunye nokugqitywa okumnandi, isitofu sokuya ekhitshini siyomelela. Ngokudibeneyo kunye neendlela zokuvelisa ezivelayo zekhitshi, iWOWOW iyayazi indlela yokugcina iindleko ziphantsi kangangoko kunokwenzeka. Ngenxa yoko, I-WOWOW inokubonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali. Siqinisekile ngomgangatho wethu wexabiso kwaye sinokukunika isiqinisekiso sokubuya semali seentsuku ezingama-90. Ukuba ungafumana itikiti elifanelekileyo ngexabiso elinye, okanye ikhitshi elitshijin leekhitshi ngexabiso elincinci, siya kukubuyisela ngokupheleleyo. Ngaphandle kwemibuzo ebuzwayo, nangaphandle kwengxaki. Siyazithemba kwimveliso yethu kwaye siqinisekile ukuba nawe uyakuyenza.
Njengazo zonke iikhitshi zasekhitshini zeWOWOW, uqinisekiswa ixesha elide lewaranti engaphantsi kweminyaka emi-5. I-WOWOW ihamba ngaphaya kwayo yonke imigangatho yemizi-mveliso, kwaye iyenza ngokunjalo malunga nexesha layo lewaranti. Sikuqinisekisa ukuba isuntsu yokuntywila yokusebenza ekhitshini ekhitshini isithuba seminyaka emihlanu ubuncinci. Akunyanzelekanga ukuba uthwale umngcipheko, kodwa siya. Ukuba ibhedi yakho yendawo yokugcina ikhitshi inokwenzeka ngomonakalo ngeli xesha, siya kuyibuyisa endaweni entsha ngaphandle kwengxaki. Esi siqinisekiso kukuzinikela kwethu kuwe.
Izibonelelo zekhitshi lokuntywila kwisikhephe ekhitshini ngokufutshane:
• Inkangeleko ekhethekileyo ye-retro yecala
• Uyilo olude lwe-arc
• Ukugqibezela okukhazimlisiweyo okugqityiweyo
I-SKU: 2311501 iindidi: IFaucets yasekhitshini, Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi tags: iblorho, Uqhekeze uNickel, Umtshati oMtshatileyo
18 x 9 x 9 intshi
Ngaphandle kwesitshizi secala